Misaotra-anao tamin'ny fankasitrahana androany, Indy! | Martech Zone
Alakamisy, Jona 11, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny volana febroary dia nisarika ny alina sy faran'ny herinandro aho nandritra ny fotoana nilatsaka an-tsitrapo ho an'ny Komity Superbowl 2012. Pat Coyle dia niantso ahy rehefa nirongatra io ary nahazo hery aho mba ho ao anaty sambo ary hanome torolàlana (ary fivoarana kely) hiarahana manangana fampielezan-kevitra ara-tsosialy sy fikarohana izany dia hahazo ny anaran'i Indianapolis manerana ny tranonkala ho tanàna voafantina.
Nanangona ny atiny voasivana avy amin'ny lafivalon'ny tranonkala sy ny tranokalam-baovao eo an-toerana ihany koa ity tranonkala ity mba hitazomana ny mponina Indy ho vaovao amin'ny fandrosoan'ny tetikasa. Tetikasa mahafa-po tokoa izy io ary ekipa mahafinaritra notarihin'i Mark Miles. Nizara sy nandresy ny rehetra… ary vitantsika izany! Mark dia iray heck an'ny mpitarika - hainy ny manambatra ekipa iray, manala ireo sakana tsy hahombiazana ary manome hery ireo olon-tiany hamita ilay asa.
Androany, nahazo takelaka tsara tarehy aho avy tamin'i Michael Karnuta, filoha lefitry ny fampandrosoana ny orinasa ho an'ny Indiana Sports Corporation ho an'ny fanampiana nomeko. Ny takelaka dia manana sombin-javatra tena izy amin'ny RCA Dome eo amboniny, milay loatra!
Raha tsy mahazatra anao ny Indiana Sports Corporation ary mipetraka eto an-toerana ianao dia mila manantona manokana ny fandaminana ary mahazo ny orinasanao mba hahazo mpikambana koa! Hetsika iray taonina no tonga tany Indianapolis tao anatin'ny folo taona ho avy ary raha te hiverina any amin'ny faritra ianao ary hahazo fankasitrahana lehibe - ity no ekipa hanatevin-daharana!
Ny Indiana Sports Corporation
Ny ekipa mpikambana ao amin'ny Indiana Sports Corporation dia mpiorina amin'ny fisarihana hetsika lehibe any Indiana ary manome fotoana tsy manam-paharoa ho an'ny tanorantsika. Ny anjara birao azo alaina amin'ny haba ihany koa dia misy tombony maromaro. Raha manana fanontaniana momba ny maha mpikambana ao amin'ny ISC ianao dia mifandraisa amin'i Mike Pruzin ao amin'ny membership@indianasportscorp.com na (317) 237-5020.
Misaotra manokana an'i Michael tamin'ny nanalany fotoana androany hijery ahy. Mike dia tena tsara fanahy tamin'ny fanehoana ny fisaorany ahy noho ny ezaka, famonoana ary ny mpitarika izay apetrako amin'ny fampiroboroboana ny faritra. Natsipiny tao anaty kitapo nisy kitay hazo mba hanaovana barbecue ho mariky ny fiatraikany mandrehitra afo ambanin'ny tetikasa. Faly aho fa nandray anjara tamin'ny fahazoana ny Superbowl (azo antoka… mety nanampy ihany koa i Peyton sy Irsay) ary feno fankasitrahana noho ny fisakaizako niaraka tamin'i Pat Coyle hanokatra ireo fotoana ireo.
Manantena aho ny hanaraka an'i Michael sy ireo mpitarika hafa miasa mafy amin'ny fitondrana hetsika ara-panatanjahantena lehibe any amin'ny faritra! Ho anao ry olona ivelan'ny Indianapolis - Tsy te hitsoaka eran'ny tananantsika aho fa tanàna lehibe misy fotodrafitrasa mifamatotra tsara. Aiza koa no ahafahanao milatsaka an-tsitrapo sy mitsambikina manampy hahazo Superbowl ?!
Tags: Bowl super 2012Indianapolismarika kilometatrarca domehaino aman-jery sosialy super Bowlsuperbowl
14 Jiona 2009 à 9:30
Arahabaina. Tsara vintana manana anao ity vondrom-piarahamonina ity!